Oovimba bokuthengisa - OutBüro
I-OutBuro izama ukubonelela LGBTQ ukuqala kunye noosomashishini ngezixhobo, ukuqonda, ulwazi, kunye nemfundo ngeembono zokuthengisa ishishini labo ngazo zonke iindlela ezivela kwintengiso yesiko, kwimidiya yoluntu, kwi-B2B nakwiindlela zokuthengisa ze-B2C, intengiso, kunye nokukhula.
Ipesenti enkulu yamaMelika azichonga njenge LGBTQ
Matshi 5, 2021 (Ukuhlaziywa ngoMeyi 3, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Inqaku elinomdla kwi 2021 LGBTI-poll ejoliswe kwi-Gallop kukuba i-7.6% yabaphenduli bakhethe ukungawuphenduli umbuzo wendlela abazichonga ngayo ukuba abanakuze bathi bangabesini esahlukileyo. Ke, i-5.6% yokuzazisa njenge LGBTQ kunye ne-7.6% ayaziwa. Andikaze ndazi ukuba ungowesini esahlukileyo akonwabanga ngokuchaza oko. Ke, ndiyakholelwa ngokwam ukuba isahlulo esihle se-7.6% LGBTQ okanye ukubuza imibuzo. Ke inani leenkcukacha-manani liphakathi kwe-5.6% kunye ne-13.2% (5.6 + 7.6). Ukuba bendiza kubheja, inani lokwenyani likwindawo ye-10-11%.
Kwi 2021 LGBTQ-egxile kuphando lwe-Gallop ekhutshwe ngoFebruwari, abantu baseMelika abazichonga njenge LGBTQ inyuke yaya kwi-avareji ye-5.6% xa kuthelekiswa nesaveyi yokugqibela ngo-2017 apho elo nani lalingu-4.5%.
Yokuzazisa LGBTQ amanani ajongeka ngoluhlobo:
I-11.7% yamadoda athandana namanye
I-3.3% enye inketho engafaniyo nesini
Abaphenduli banokunika iimpendulo ezininzi xa bechaza ubuni babo besini; kungoko, iitotali zingaphezulu kwe-100%.
Ukubuyisa ezi pesenti ukumela isabelo sabantu abadala base-US bafumana i-3.1% yabantu baseMelika abachonga njengabantu abathandanayo, i-1.4% njenge-gay, i-0.7% njenge-lesbian kunye ne-0.6% njenge-transgender.
UGen Z Ukhululeke ngakumbi Ukuchonga njenge LGBTQ
Ngenxa yenkqubela phambili eyenziweyo eluntwini, namhlanje uGen Z ukhululeke ngakumbi ekubeni kukuzazisa okuyinyani LGBTQ. Kolu hlolisiso lwakutsha nje lwe-Gallop kwabo baneminyaka eli-18 ukuya kweli-23 malunga nomnye kwisithandathu (15.9%) ochongwe njengenye into ngaphandle kwesini esahlukileyo.
Esinye sezizathu eziphambili LGBT Ukuchongwa kuye kwanda ngokuhamba kwexesha kukuba izizukulwana ezincinci zisengozini yokuzijonga njengezinto ezingesiso isini esahlukileyo. Oku kubandakanya malunga nelinye kumalungu amathandathu abantu abadala be-Generation Z (abaneminyaka eyi-18 ukuya kuma-23 ngo-2020).
LGBT Ukuchongwa kungaphantsi kwisizukulwana ngasinye esidala, kubandakanya iipesenti ezi-2 okanye ngaphantsi kwabantu baseMelika abazalwe ngaphambi ko-1965 (abaneminyaka engama-56 nangaphezulu ngo-2020).
Ukuzazisa kwabantu baseMelika njenge LGBT, kwisizukulwana
Isizukulwana Z (owazalwa ngo-1997-2002)
Millennials (wazalwa ngo-1981-1996)
Isizukulwana X (sazalwa ngo-1965-1980)
I-Baby boomers (eyazalwa ngo-1946-1964)
I-Traditionalists (eyazalwa ngaphambi ko-1946)
Okwangoku, isizukulwane Z sixhomekeke kakhulu kwicala lokulala ngesini LGBT. Oku kuthetha ukuba phantse i-12% yabo bonke abantu abadala be-Z zichonge njengabantu abathandanayo. Ukuthelekisa, malunga nesiqingatha sewaka leminyaka abachonga njenge LGBT bathi bayathandana. Kwakhona, esinye isifundo Ukugqitywa kwasekuqaleni kuka-2019 kufumanise ukuba ama-29% amaMelika asusela kwiminyaka eli-18 ukuya kwengama-30 ubudala abachonga njengabantu abathandana nabantu besini esithile ngamanye amaxesha banamava esini esifanayo abizwa ngokubaheteroflexible".
Elona candelo linomdla kula manani inokuba kunokuba lula ukuba ngaphezulu kakhulu. Olu phononongo lukwazile ukuqokelela ulwazi kwelona candelo lidala leGeneration Z, eneminyaka eli-18 ukuya kwengama-23, ke abantu abangcolisayo balindele ukuba ipesenti iqhubeke nokukhula njengoko ixesha lihamba kwaye abantu beziva bekhululekile ukuhlala kwinyani yabo.
Ngokophando, ngaphezulu kwesiqingatha se- LGBT Abantu abadala (54.6%) bachonga njengabantu abathandanayo. Malunga nekota (i-24.5%) bathi bangamafanasini, nge-11.7% bachonga njengama-lesbian kunye ne-11.3% njenge-transgender. I-3.3% eyongeziweyo inikezela ngolunye uhlobo olungakhethanga ngokwesini okanye ixesha elichazayo ukuba bachaze indlela abajonga ngayo ngokwesondo, "njengendlovukazi."
Ukuziqhelanisa ngokwesini nabantu baseMelika
Amanani amele ipesenti yawo onke amalungu amadala kwisizukulwana ngasinye anolo lwazi lokuziphatha ngokwesondo
Umahluko obekiweyo wenzala uphakamisa imibuzo malunga nokuba uphezulu na LGBT Ukuchongwa kwabancinci kunabadala baseMelika kubonisa utshintsho lokwenyani kwisini, okanye ukuba sibonisa nje ukuzimisela okukhulu kwabantu abancinci ukuba bachonge LGBT.
Udidi: Ukwahluka kunye nokubandakanywa, Izixhobo zoMqeshi, Marketing
tags: LGBTQ Izibalo, LGBTQ Ukufunda
UAlfred Verhoeven: Ukuthengisa iRainbow-Corporate LGBTQ Intengiso
Februwari 27, 2021 (Ihlaziyiwe ngoJuni 6, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu ezivela kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noAlfred Verhoeven, umcebisi wentengiso kunye nePh. umgqatswa.
Mamela / landela usetyenziso lwakho lweaudio oluthandayo
Shiya ingxelo yesiqendu okanye umyalezo orekhodiweyo
Siza kuwathanda amagqabantshintshi akho asezantsi kwiphepha ngalinye lesiqendu sibuza imibuzo kum, iindwendwe zethu, kunye nokunxibelelana nabanye abagqabazi.
Siphinde sibe nenqaku apho unokuthi "ungene" kwaye ushiye umyalezo orekhodiweyo. Umyalezo wakho orekhodiweyo unokusetyenziswa kwiziqendu ezizayo kwaye ufuna ukubhaliswa okulula kwiqonga leepodcast
Yiba lundwendwe okanye ucebise undwendwe
01:15 Isingeniso esifutshane sika-Alfred
02:30 Imvelaphi ka-Alfred ibandakanya isidanga somthetho kwaye ekuqaleni ebenenkani ekuthengiseni kwaye usebenze kumaziko emali yezezimali kodwa ebesebenza kubucala kangangeminyaka engama-20 ukuza kuthi ga ngoku.
04:20 Emkhosini, uAlfred wayeyingcali yolwimi apho wafunda khona isiRashiya esebenza kummandla wobukrelekrele emkhosini.
06:00 Sixoxa ngendlela ukuthengisa kunye nentengiso ezindawo apho uqeqesho lunceda ukukhulisa izakhono zendalo kunye nezakhono 08:00 UDennis wabelana ngonxibelelwano olufanayo ngokufunda ulwimi, ubukrelekrele bezomkhosi, kunye nebali elinxulumene noko.
15:00 Ungalahlekelwa njani ngumntu okulandelayo usebenzisa iindlela ezi-3 zokuhamba
Ngo-17: 00 uAlfred wabelana ngenkuthazo yakhe ekusebenzeni kwi-Ph.D yeNtengiso. kwaye kugxilwe kuyo okubizwa ngokuba yiNtengiso yoMnyama-Akukho mntu wenze olu phononongo ngaphambili
Ngo-19: 00 ukuba isterebo sohlobo lobutyebi obuphezulu, ingeniso yokulahla, ingeniso emibini akukho bantwana bavela kuyo kunye nendlela isifundo sokuqala se-niche esisetyenziswe ngendlela engeyiyo kwaye kubhekiswa kuyo. Jonga udliwanondlebe noT Todd Evans weRivendale Media. https://outburo.com/spanning-95-of-lgbtq-shicilela-kwi-Intanethi-kumajelo osasazo /
26:00 uAlfred uxoxa ngendlela kwaye njani LGBTUluntu lwase-Q lwaba yinto ekugxilwe kuyo kwinkampani urhwebo
27:45 Njani LGBTAbantu be-Q bahlala bengabakhathaleli ngenxa yokungafumani bantwana
30:00 Uphando luka-Alfred lukhulu kwaye lusakhula kodwa lujolise kwi-Ph.D. ithisisi inokulawulwa ngelixa unikezela iseti enkulu yamanqaku ophando kwiwebhusayithi yakhe. https://marketingtherainbow.info/
31:00 UAlfred uxoxa njani iinkampani zimele ukulingana nokuba zibandakanya njani ixhasa inzuzo kwishishini.
I-34: 50 iingozi ze-back-wing backlash kunye nendlela enokujika ngayo kwaye izuze inkampani kwaye itshintshe ngokuhamba kwexesha ngenkqubela phambili kwezentlalo nakwezomthetho
36:00 Njani LGBTQ intengiso ebandakanyayo ngoku ixhaphake kakhulu kwaye iinkampani zibubudenge kakhulu ukuba zingamkeli ukuthengisa okubandakanya
39:00 Sixoxa malunga nokudaleka LGBTQ ukulingana ukwamkelwa.
44:00 U-Alfred uthatha uphando umxholo kunye nokwenza amanqaku echaza inkampani LGBTImbali yentengiso ye-Q kunye nohambo. Jonga iwebhusayithi kunye nejelo le-YouTube elidweliswe ngezantsi.
51:00 Sincokola ngeempazamo zentengiso zangaphambili kunye nokufunda kubo.
Ukuqhagamshela noAlfred umfumane kwi-OutBüro apha. https://outburo.com/profile/tawv/
Indawo yewebhu: https://marketingtherainbow.info/
Jonga ijelo lakhe le-YouTube LGBTQ ukuthengisa zorhwebo.
Isiteshi seYouTube: https://www.youtube.com/c/AlfredVerhoeven
Joyina mna noAlfred kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi ye-gay, i-lesbian, i-bisexual, i-transgender, i-queer, i-allies, kunye ne-yethu abaqeshi abaxhasayo LGBTQ Ukwamkela izibonelelo ezijolise kukulingana emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
Ngaba ungathanda ukuvezwa ngolu hlobo? Nxibelelana nomninimzi uDennis Velco. https://outburo.com/profile/dennisvelco/
Udidi: yezehlo, Marketing
tags: Ukuthengisa ngokudibeneyo, Intengiso ebandakanyayo, LGBTQ Ukuthengisa, Umcebisi wentengiso
Indlela yakudala yokuthengisa xa ithelekiswa nendlela entsha yokuthengisa kwindlela yokuthengisa yokuthengisa
Februwari 11, 2021 (Ukuhlaziywa ngoMeyi 2, 2021) E papashwe ngu Ugqirha weOri
Ukuthengisa kutshintshe kakhulu kumashumi eminyaka adlulileyo. Kwinqaku elilandelayo uza kufumana iingcebiso ezisi-7 zokujongana notshintsho kunye nokuphakamisa ukuthembela kwabathengi.
21BANG: Yongeza ishishini lakho kwi-OutBüro ngoJan 31, 2021
Disemba 31, 2020 (kuhlaziywa ngo-Epreli 20, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Qala unyaka wakho wama-2021 ekunene ngokwenza iprofayili yakho yobuqu kwi-OutBüro KANYE ukongeza ishishini lakho okanye uluhlu lombutho. Xa usenza njalo sebenzisa ikhowudi yekhuphoni i-21BANG ukufumana i-21% isuswe kubhaliso lonyaka. Kwimibutho enabasebenzi abali-1-50, le nkqubo iyazisebenzela. Kwimibutho engaphezulu kwama-50 abasebenzi basebenzisa le fomu yokunxibelelana ngoJan 31, 2021, ukuze kusetyenziswe isaphulelo sama-21% kuncedo lwakho.
Xa ubhalisa komnye ufumana zombini. Unokusebenzisa nokuba zombini okanye zombini. Siyavuya ukunceda kunye nokuvula ingxelo yokuphucula amanqaku esiza.
kuba LGBTQ Oosomashishini- Ukuhlaziywa kweQueer
Ukuba ngumrhwebi kuhlala unesizungu, kunzima, kuyonwabisa, kuyothusa kwaye kuyonwabisa. Umlingo kunye nemimangaliso yenzeka xa sikholelwa kuthi kwaye sithatha inyathelo. Thatha amanyathelo namhlanje ngokujoyina NgaphandleBüro.
Yenza okanye ujoyine amaqela agxile kuhlobo lwakho, ishishini, indawo, okanye nangaphezulu
Buza abathengi / abathengi bangoku ukuba balinganisele ishishini lakho kwi-OutBüro
Khangela kwaye ukhulise ubuhlakani beshishini, fumana abathengi abatsha
Yakha ulwazi, ulwazi, ukuthembana, kunye noluntu ngokuqinisekileyo apho uhlala khona
NgaphandleBüro ukulinganisa Ngaba iSchema.org iyahambelana intsingiselo yokuba ziyabekeka kwaye zinokubonisa kuluhlu lweinjini yokukhangela
88% abathengi kwi-intanethi bathembela uphononongo oluthunyelwe kwiiwebhusayithi zabathengi ngaphezulu komlomo. Ngubani owaziyo ukuba izimvo zabasemzini ziya kwenza umahluko omkhulu kwindlela yokuziphatha kwabathengi? Ukuba nohlolo oluthe kratya kunokunceda ishishini lakho ukuba libe kwinqanaba eliphezulu kwiziphumo zokukhangela, ukwandisa ukubonakaliswa kwakho, kunye negunya lesizinda. Ukuphononongwa kwi-OutBüro kwakha ukuthembela ngaphakathi LGBTQ yentengiso.
Yongeza uLuhlu lweShishini / loMbutho weQueerReviews
Abaqeshi - UkuHamba koMqeshi
Kukho iitoni zezibonelelo zabaqeshi ojoyina i-OutBüro nokuba ungakanani na umbutho. Jonga iphepha lesishwankathelo kwaye masixoxe ngethuba elikhethekileyo lombutho wakho.
Yongeza uLuhlu lweShishini / loLungelelwaniso loMqeshi
Imibutho engaphezulu kwama-50 abasebenzi icela ikowuti / ukhuseleko
Unemibuzo? Sebenzisa ifom yoqhakamshelwano kwaye siza kuphendula ngokukhawuleza.
Ufuna inkxaso yenkxaso / indawo
Umbuzo wePodcast okanye ingcebiso yesihloko
Isiphakamiso seNdwendwe sePodcast
I-L kwi LGBTUQ umele ntoni?*
UDonna Williams: LGBTQ Imifanekiso yeStock eQinisekisiweyo kwiLibertiPix
Disemba 23, 2020 (Ihlaziyiwe ngoJuni 6, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noDonna Williams, usomashishini ophuma ngaphandle kwezithandani kunye nomseki-kunye weLibertiPix.
I-LibertiPix yindawo entsha ye-intanethi yokufota eyiyo LGBTQ ukusuka ku-A ukuya ku-Z. Umququzeleli uDonna Williams unamava eminyaka kushishino lweendaba zentengiso. Kule ndima waye wanxunguphala kukhetho olulinganiselweyo lwemifanekiso eqingqiweyo kunye nevidiyo emele, okanye ukuzama ukumela LGBTQ uluntu. Uxoxa ngezinye zeendlela ezingathandekiyo ezichanekileyo kunye nemifanekiso ebonisa ngokucacileyo gwenxa. Uye wenza umzekelo wento ekucaca ukuba yayingumama kunye nentombi kodwa yahlulwa phakathi "njengesibini esithandanayo". Emva kokusebenza kwishishini lokuthengisa iminyaka uyazi okokuqala ukuba kukho isidingo kunye nemfuno yemifanekiso kunye nevidiyo ezimele ngokwenyani LGBTQ uluntu. Oku kusilela kunye nesidingo samkisa uDonna kunye nenkosikazi yakhe njengabaququzeleli bokumilisela iLiberiPix.
KwiLibertiPix, bonke abafoti, abafoti bevidiyo, kunye neemodeli zichonga njenge LGBTQ. Isiqalo sinesiseko esincinci kodwa esomeleleyo sabafoti kunye nabafoti kwi-UK kwaye bafuna abanye abavela kwihlabathi liphela ukuba bajoyine kwaye bangenise imifanekiso kunye nevidiyo ezimfutshane. ILibertiPix ibonelela ngesabelo seKhomishini esingaqhelekanga sama-50%.
Ngaba uyazi LGBTQ umfoti? Maka kubo kwizimvo ezingezantsi okanye wabelane ngale vidiyo Imidiya yokuncokola kwaye ubaphawule.
ILibertiPix ifuna imifanekiso ehamba ngaphaya kwempembelelo yokuphefumlela ubunyani kuyo LGBTQ ukuthengisa. Okwangoku, abathengi besiza bahlawulela umfanekiso ngamnye nangona besenza indawo yokuphucula ukubonelela ngemodeli yobhaliso kwangoko kwi-2021.
Joyina iLibrtiPix namhlanje. Ukuloba imifanekiso emikhulu ukuhlaziya imikhankaso yakho yokuthengisa.
Kwindlela yam eqhelekileyo yokuncokola, sidibanisa izifundo ze oosomashishini abanamabali okuqala kwethu uhambo.
Nxibelelana noDonna kwi-OutBüro apha: https://outburo.com/profile/donnal/
Joyina mna noDonna kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abesini esahlukileyo, ikumkanikazi, amahlakani kunye nathi abaqeshi abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
tags: Imifanekiso yesitabane, Imifanekiso yeLesbian Stock, LGBT Imifanekiso yesitokhwe, LGBTQ Stock Iifoto, Imifanekiso yeTransgender Stock
UWendy Weiss: U-Queen of Cold Calling
Disemba 21, 2020 (Ihlaziyiwe ngoJuni 6, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco kunye noWendy Weiss: uKumkanikazi weCold Calling.
UWendy waqala umsebenzi wakhe njengomdanisi webhaleyi. Wathuthela kwisixeko saseNew York ukulandela elo phupha. Njengoninzi, kuye kwafuneka asebenze usuku lomsebenzi ukuze aphile. Emva kokuba ediniwe ziitafile zokulinda waqala umsebenzi kwinkampani yokuthengisa ngomnxeba apho wafumana uqeqesho kunye noqeqesho. Uye wafumanisa ukuba uyawuthanda umsebenzi kwaye ulunge kakhulu. Emva kwexesha elithile wazenzela eyakhe inkampani yokuthengisa ngomnxeba ngokuthe ngqo. Ukusebenza neenkampani ezininzi kumashishini ahlukeneyo yena kunye neqela lakhe bahlonipha indlela yabo kwaye bafumana izinto eziqhelekileyo ezinokubakho.
Oku kuqonda kwandise umbono wokuba inkampani yakhe iqhubele phambili ngokusungula icandelo loqeqesho lokuthengisa elisesona sixa sikhulu seshishini lakhe namhlanje, Iziphumo zeCold Calling, ingcebiso yoqeqesho kwintengiso. Kuqeqesho lokuthengisa, uWendy usebenza ikakhulu neenkampani ezincinci kunye nezo zangaphakathi ukuze abone indlela abanxibelelana ngayo nexabiso labo kubaxhamli beenkonzo ngaphezulu kweenyanga ezi-6 zokunxibelelana ngezandla. Amaxesha amaninzi iiarhente zentengiso kunye nabanini bamashishini bayayinyanzela imizamo yabo ngokungazi ngokungayibeki imveliso yabo okanye inkonzo ngokufanelekileyo. UWendy ubonelela ngemizekelo eliqela kwincoko yethu.
Wonke umntu osomashishini kufuneka athengise. Ligazi lobomi lenkampani. Akukho mntu uzelwe njengentengiso. Njengayo yonke into, ukuba mkhulu kwintengiso sisakhono onokusifunda. UWendy ukholelwa ukuba kubalulekile ukuba nesiseko sentengiso ngaphambi kokuqesha ummeli wentengiso ukuze izinto ezisisiseko ezilindelweyo, izixhobo, iindlela kunye neenkqubo zibekhona ukuze ufumane olona khokelo. Rhoqo abathengisi baya kugxeka ezinye izinto ngenxa yesizathu sokuba bengavali ishishini ngelixa enyanisweni isizathu sikukungabikho konxibelelwano olucacileyo olusebenzayo oluvela kwintengiso oluya kwithemba. Uqeqesho lukaWendy lujongana noku ngendlela ebanzi. Fumana uninzi kwiqela lakho lokuthengisa.
Awulungelanga uqeqesho lomntu ngamnye? UWendy ubhale ezi ncwadi zilandelayo:
Isikhokelo saBanini bamashishini ekumiseni ukuTyunjwa okungakumbi xa iiThemba zakho zigqibelele ngokugqibeleleyo
Incwadana yokuphumelela yabathengisi: Izikripthi eziBalulekileyo kunye neQhinga lokuSebenza kweNtengiso yeSkyrocket
Izikripthi zegama-negama kufuneka ufikelele kwizithembiso ezifanelekileyo, ukubhukisha amadinga amaninzi, ukulandelela, kunye nokuvala ukuthengisa ngakumbi ngoxinzelelo oluncinci.
Sebenzisa eli khonkco le-OutBüro kwisaphulelo sakho: https://wendyweiss.isrefer.com/go/SWHPDF/OutBuro/
Fumana ikopi yakho yasimahla ye "Isikhokelo sokuSinda ekubandeni ngokuBandayo-Qalisa ukuseta izikhundla kwiiYure ezingama-24 ezizayo" ngokusayina ukuze ufumane iingcebiso zokuthengisa kuWendy apha https://coldcallingresults.com/
Amanyathelo ali-12 okufumana amaThuba okuThengisa namhlanje
Ukukhuphela simahla apha: https://wendyweiss.isrefer.com/go/owners-guide/OutBuro/
Ukufunda kuhle, kodwa unokufumanisa ukuba uyakuxhamla ekuqeqesheni. UWendy kunye naye Iqela lingasebenza nawe kunye neshishini lakho elahlukileyo ukufezekisa izakhono zakho zokuthengisa. Jonga indawo yakhe ukuze ujonge iinketho azibonelelayo xa uthengisa uqeqesho kunye nenkxaso. https://coldcallingresults.com/
Nxibelelana noWendy kwi-OutBüro apha. https://outburo.com/profile/wendy/
Ndijoyine kunye noWendy kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abesini esahlukileyo, ikumkanikazi, amahlakani kunye nathi abaqeshi abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
tags: Cold Calling, UkuSebenza ngokuThengiswayo okuSebenzayo, LGBT Umnini-shishini, LGBT Usomashishini, Uqeqesho lweNtengiso, Isicwangciso seNtengiso, Ukuthengiswa kweTraining
Fumana umvuzo oshiyekileyo nge-OutBüro
Disemba 15, 2020 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Masikhule kunye! Ngaba ungumcebisi weyantlukwano kunye nokubandakanya okanye ezinye iingcali ezibonelela ngeemveliso okanye iinkonzo kwiinkampani, ezingenzi nzuzo, iiyunivesithi, okanye izinto zikarhulumente? Okanye mhlawumbi ungumbutho onesiseko sobulungu.
Jonga le ntetho imfutshane kwiNkqubo ye-Ambassador ye-OutBüro.
Ukusebenzisa ubudlelwane bakho nabaqeshi, iimveliso, iinkampani, ezingenzi nzuzo, kunye / okanye iiarhente zikarhulumente zazisa OutBüro njengomqeshi uphawu, ukufunyanwa kwetalente, kunye neqonga lokuzibandakanya kwabathengi. Zuza i-15% yekhomishini kwimirhumo oyizisileyo kwi-OutBüro ngaphandle kwemida okanye ii-caps. Eli lithuba elihle lokubonelela abathengi bangaphambili nabangoku isisombululo esitsha nesifunekayo. Babo LGBTQ umsebenzi kunye nomthengi amanqaku inokuba sisalathiso sokuba bafuna uninzi lweenkonzo zakho eziphambili ezinje ngokwahluka kunye nokubandakanya uqeqesho / uqeqesho.
Isivumelwano seNkqubo ye-Ambassador ye-OutBüro sivulelekile kubantu, kwiinkampani okanye kwimibutho. Ke ngoko ikhomishini inokusetyenziswa njengengeniso eyongezelelekileyo yomvuzo wakho, ingeniso yeshishini, okanye njengengxowa mali exhasa inzuzo yakho engenzi nzuzo.
Umgangatho wethu imakethi ejongiwe izikhokelo azikhawulelwanga kubanini bamashishini, abaLawuli beNtengiso, abaLawuli babaSebenzi, abaLawuli bokungafani kunye nokubandakanywa, kunye nomntu ophambili omele umqeshi LGBTQ Iqela Elinabasebenzi.
Emva kokubukela ukuba unomdla, sebenzisa eli khonkco ukugcwalisa ifom emfutshane ukubonelela kancinci malunga nenkampani yakho / umbutho okanye
Emva kokufunyanwa kwale fom, iya kujongwa kwakhona. Singahlengahlengisa umnxeba / incoko yevidiyo, kwaye ukuba kubonakala kufanelekile, siya kukuthumelela isivumelwano kunye nekhonkco kwividiyo exoxa ngokweqendu ngalinye lesivumelwano ngokweenkcukacha. Bukela amaxesha ambalwa ukuba uyathanda. Ngelixa ujongayo yenza amanqaku ukuze sikwazi ukulandela ukuza kuphendula nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo onokuthi ube nazo.
Nje ukuba sonke sivume ukuya phambili, siya kuthumela isivumelwano kuwe ukuze sisayine (ii) i-elektroniki. Emva koko, siya kubonelela ngolwazi lokuba ulungele ukuqala ukukhupha izibonelelo zokujoyina i-OutBüro njengomqeshi / uphawu. Udala umdla wokuqala wokufunda ngakumbi kwaye ufumane ithuba lokubhukisha ngakumbi iifowuni zokuhlola. Siza kusebenza njengeqela ukuphumelela umqeshi / iimveliso.
Yenza eyakho iprofayile OutBüro namhlanje kwaye uqalise ukuziqhelanisa nayo. Unemibuzo? Silapha ukunceda.
Ishishini / Umbutho
Ukuba umntu nceda ufake "isiqu sakho"
Idilesi yesitrato Idilesi ye2 isixeko Isixeko / iPhondo / ingqingqi Ikhowudi yeZip / Posi Afghanistani AlibhaniyaAljeriyaAmerican SamoaAndorraAngolaAngwilaAntarcticaAntiguwa neBarbuda ArgentinaArmeniya ArubhaOstreliyaOstriya AzerbayijaniBhahamasBhareyiniBhangladeshiBarbadosBhelarusiBheljiyamBelizeBeninBhermudaBhutanBholiviyaEBonaire, Sint Eustatius kunye SabaBhozniya neHerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBhulgariyaBurkina FasoBurundiKhambodiyaKhameruniKhanadaKheyip VerdeCayman IslandsIriphabliki yaseAfrika eseMbindiniTshadChileiTshayinaChristmas IslandICocos IslandsKholambiyaKhomorosCongo, Democratic Republic of theCongo, kwiRiphablikiIsiqithi saseKhukicosta RicaKhroweyishiyaTyhubhaCuraçaoSayiprasi Umphakathi waseCzechIvory CoastDominikhaJibhutiDominikhailizwe lasedominicEkhuwadoEgyptEl Salvado Ekhwithoriyal GiniEritreaEstoniyaEswatini (Swaziland)YuthophiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlendFransi French GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJemani GhanaGilbhralthaGrisiGrinlendGrenadaGuadeloupeGuamGuatemaleGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiIva kunye neMicdonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHangariAyisilendIndiya IndoneshiyaIranIrakhAyalendIsle of ManSirayeli ElamaTaliyaneJameyikhaJaphanJerseyJordanKazakhstanKhenyaKiribatiKhuweyithiKhirgizstanLao People ye-Democratic RepublicLathviyaLibhanonLesothoLayibheriyaLibhiyaLikhtensteyinLithuwaniyaLaksembhegMacauMasedoniyaMadagaskaMalawiMaleyishiyaMaldivsmaliMaltaIsiqithi saseMashalMartiniqueMorithaniyaMorishiyasiMayotteMekhsikhoMikhroneshiyaiMoldaviaMonakhoMongoliyaMontenegroMontseratMorokhoMozambikhMyanmarNamibhiyaNauruNephalelamaDatshi New CaledoniaNyu ZilendNikharaguwaNayijaNayijeriyaNiueIsiqithi saseNofolkhemantla ekoreaIsiqithi saseMariyana eseMantlaNoroweOmanPhakistanPalauBasePalestina, State ofPanamaGini eNtsha yasePapuwaParaguayPeruFilipayinziPitcairnPholendPhotshugoiPuerto RicoKhwathaRomaniyaRhashiyaRwandaintlanganisoSaint BarthelemySeyint HelenaSeyint Kitsi neNevisSeyint LushiyaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSeyint Vinsent neGrenadinsSamoaSan MarinoSawo Tome nePrinsipeISaudi ArabiaSenegalserbiaSeytshelsSierra LeoneSingapho Sint MaartenSlovakiyaSloveniyaIsiqithi saseSolomonSomaliyaMzantsi AfrikaSouth Georgiaemaznstie ekoreaSouth SudanSpeyinesri LankaSudanSurinameKwiSvalbard naseJan Mayen IslandsSwidenSwizalendSiriyaTaiwanTajikistanThanzaniyaThayilendi East TimorTogoTokelawuTongaThrinidadi neThubhagoThunishiyaikarikuniTurkmenistaniTurks and Caicos IslandsTuvaluI-US Minor Outlying IslandsUgandaYukreyiniIUnited Arab Emiratesiunited Kingdomeunited StatesUruguayUzbhekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis FutunaWestern SaharaYemenZambiyaZimbabweisiCatalanName Islands ilizwe
Inani eliqikelelweyo labaNxibelelwano / amashishini / Imibutho
Uqikelelo lobungakanani bemilinganiselo yeenkampani / umbutho
Umndilili wenani lilonke labasebenzi, uqikelelo nje olulinganiselweyo lulungile.
Chaza ishishini / umbutho wakho
Loluphi uhlobo lweshishini / lombutho? Isebenze ixesha elingakanani? Nantoni na, ngakumbi, ongathanda ukwabelana ngayo?
NgaphandleBüro LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi ye-gay, i-lesbian, i-bisexual, i-transgender, i-queer, i-allies, kunye ne-yethu abaqeshi abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
Udidi: Izixhobo zoosomashishini, Marketing
tags: Ingeniso eyongezelelweyo, Ikontrakta ezimeleyo, Ukuthengisa okuzimeleyo, Umvuzo ongaphaya, Ingeniso eseleyo
Indlela esecaleni yoShishino loShishino: “Umgibe olungileyo”
Novemba 30, 2020 (ehlaziyiweyo ngoNovemba 30, 2020) E papashwe ngu UCurtis Danskin-Ainslie
Xa iqela lakho lonke likwibhodi ngokubeka konke okusemandleni abo ukuba lisebenze yonke imihla, emva koko iba yinkcubeko kunye nokuzalwa.
tags: LGBT Usomashishini, UPhuhliso loPhuhliso
UMat Skallerud: Ubuchule, ubuvulindlela, LGBTQ iNkokeli yeNtengiso
Novemba 21, 2020 (Ihlaziyiwe ngoJuni 6, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zabahlali kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco kunye nomrhwebi oshishino wentengiso ye-intanethi uMat Skallerud. UMat waseka enye yewebhusayithi yokuqala egxile kuluntu lwesini. Ngethuba elifutshane, waseka enye yewebhusayithi yokuqala (gaywired.com 1995) yoluntu lwabafazi abathandanayo (shewired.com) bobabini abafunyenwe nguLapha Media (2006) kwaye abasasebenzi. UMatt wabelana ngembali ethile ejikeleze ukukhula kwangoko LGBTQ iqonga lewebhu ubukho. UMatt wabelana ngendlela LGBTQ babengabamkeli bokuqala basebenzise iisayithi ukunxibelelana nabanye.
Amava awafumeneyo kula mava akhokelela kuMat ukuba asungule i-Pink Media (2008), inkampani yentengiso egxile ekuncedeni iinkampani zijolise kwaye zifikelele LGBTQ uluntu kuwo onke amaqonga eendaba. Yena kunye nePink Media baye baba negalelo ekuziseni uninzi lweziganeko ezibukhoma neziqinisekileyo, iinkomfa, kunye neesimpoziyam malunga LGBTQ ukurhweba ngomnqweno jolisa kwintengiso ye-SEO, kunye nobudlelwane noluntu (PR). Siphinde sixoxe malunga notshintsho lwangoku kwiminyhadala ebukhoma yokunyusa iminyhadala / iinkomfa ezikwi-intanethi ezinexabiso eliphezulu lemveliso ngokuchaseneyo nexesha elidlulileyo lezinto ezenziwayo xa kuthelekiswa nomxholo obonakalayo onokufikelela kumawaka imini nobusuku. UMat no-Pink Media bahlala bezama ukuvela ngeendlela zabo.
Siyaxoxa Imidiya yokuncokola I-etiquette kunye nokuyisebenzisa ngokufanelekileyo kuthungelwano lweshishini kunye nokunyaniseka kwiindawo ezinjenge-OOutBuro.com kunye ne-LinkedIn. Kutshanje noGary Vee ebewathathela ingqalelo amathuba LinkedIn. Sabelana ngamabali athile ngendlela abanye Iiprofayili ze-LinkedIn ayifanelekanga kwaye uthelekise kwaye uthelekise ixabiso leendawo zosasazo zasekuhlaleni kwaye ukukhetha kakhulu into oyithumelayo kunokwenyusa ukubandakanyeka xa kuthelekiswa nokwabelana ngomxholo osemgangathweni ophantsi rhoqo. Kwincoko yethu, uMatt wabelana ngesakhe uhambo loosomashishini kunye nezicwangciso zangoku nezexesha elizayo.
Ukuqhagamshela noMat kumfumana kwi-OutBüro apha. https://outburo.com/profile/mattskal/
Malunga nePink Media
Sidibanisa amandla kunye nokufikelela komxholo nakwintlalo ukuthengisa amajelo eendaba kunye nemveli kwi-Intanethi amacebo kubandakanya iintengiso zesibhengezo kunye nemikhankaso ye-imeyile. Sidibanisa iPR, ukuThengisa, ukuThengisa kunye neMidiya yokuNxibelelana
Inethiwekhi ye #ILoveGay
Intengiso ejolise kakhulu kwimidiya yoluntu
LGBTQ Amathuba okuphembelela
Imidiya yokuncokola PR
Imidiya yokuncokola ukubeka iliso kunye nokuhlalutya
Ukujolisa ekuHyper, ekuThengiseni kweNkqubo
Ukujoliswa kweHyper email Marketing
Ishishini kwiNtengiso yeShishini
Igama eliphambili lokuthengisa kwiGoogle,
I-Bing namanye amaqonga okukhangela
Ukubeka iliso kwi-SEO kunye nohlalutyo
Ukuqengqeleka kwangaphambili kunye nezinye iindlela zentengiso yevidiyo
Intengiso yevidiyo ye-OTT
Ividiyo njenge Umxholo kwintengiso yemidiya yoluntu
Iiphakheji zevidiyo zesiko
Ukufunyanwa kwePinki yeendaba
LGBTQ Iveki NYC
LGBTQ Ukuboniswa kweMithombo yeendaba eNtsha kunye neenkomfa
Inkxaso-mali yethu yoKhuseleko
Ndijoyine kunye noMat kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abesini esahlukileyo, ikumkanikazi, amahlakani kunye nathi abaqeshi abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
tags: Lgbt ukuthengisa, LGBTQ Ukuthengisa, LGBTQ ukuthengisa, UMat Skallerud, Imithombo yeendaba ePink, Social Media Marketing
UScott Seitz: Izandiso zeDomain ye-Intanethi njengeQueer njengawe
Oktobha 30, 2020 (Ihlaziyiwe ngoJuni 6, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu ezivela kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco kunye nomsunguli wombhalisi wesizinda sePrideLife kunye ne-CEO uScott Seitz.
Yiba nesibindi, Phuma, ubonakale, kwaye ngoku enkosi kulwandiso lwesizinda esitsha.LGBT Umbutho wakho, ishishini, kunye negama lakho linokubakho nje kubukho bakho be-intanethi. Jonga udliwanondlebe / iitodampampu zexesha elingezantsi njengesishwankathelo kunye nokutsiba kwicandelo elinomdla. NIKEZA: 38:00 Uninzi luqala ishishini lalo. PrideLife kude kube sekupheleni kuka-2020 ukubonelela nge-30% isaphulelo kunye nokuthenga isibonelelo esinye. www.PrideLife.lgbt
NOKUSEBENZA: 38: 00 Uninzi luqala amashishini alo. PrideLife kude kube sekupheleni kuka-2020 ukubonelela nge-30% isaphulelo kunye nokuthenga isibonelelo esinye. www.PrideLife.lgbt
01: 10 UScott ubonelela ngesishwankathelo sokubandakanyeka kwi-ICANN
02: 00 Njani isidingo sokwandiswa kwesizinda se-intanethi sikhule ngaphaya kwe-.com ukubandakanya .gay kunye.lgbt
03: 00 Ukususela ekuqaleni LGBTUluntu lwase-Q lwamkelwe njengabasebenzisi abalulekileyo be-intanethi
3: 30 IkratshiLife.lgbt ngumbhalisi wokuqala wesizinda oqinisekisiweyo kwihlabathi liphela ofana ne-GoDaddy.com okanye iDomain.com
04: 00 Benza njani ubudlelwane phakathi kwababhalisi besizinda, abanini besizinda kunye ne-ICANN
06: 20 Ngaba oku kuphelele LGBTQ indalo? UScott ucacisa indlela ikhonkco lemibutho ebandakanyekayo eyakha ngayo intembeko nokhuseleko kangangoko.
12: 00 Xa ubhalisa idomeyini idatha oyinikezelayo igcinwa kwinqanaba lobhaliso.
13: 00 I-PrideLife izama ukwakha uluntu lwezixhobo kunye nokuhanjiswa kweenkonzo ukugcina okuninzi kwi LGBTQ yoluntu kangangoko
14: 00 Ke yintoni inzuzo ku LGBTQ uluntu ukuxhasaLGBTImibutho engabanini baka-Q abathenga / bafumana ulwandiso olujolise kwindawo yesini?
17: 00 Ukuma ekuhlaleni kwe-ICANN kuchaziwe-indlela eyahluleke ngayo LGBTUluntu lwase-Q ngokungabikho kombutho wehabhu lwenze i-ICANN yanikezela ngezi zandiso zommandla kubantu abanga-LGBTImibutho yeQ.
18: 00 Ukwahlulwahlulwa kwemizamo kuthetha ukunqongophala kwezixhobo kunye nefuthe elinomda. Sisonke sinokufeza izinto ezimangalisayo apho sonke siphumelela. I-OutBüro (www.outburo.com) izabalazela ukuba ibhulorho yokudibanisa konke LGBTQ abantu, imibutho, kunye nabanini bamashishini kwihlabathi liphela.
23: 00 Ukuvela kwe LGBTQ uluntu ngenxa ye-intanethi.
24: 00 UScott ucacisa ukuba i-OutBüro yinxalenye entsha ebalulekileyo yokuqhubela phambili LGBTIzibonelelo ezisisiseko zoluntu ngokuba sisithuthi sonxibelelwano, ukufumanisa kunye nokukhula.
25: 00 Emsebenzini, nokuba yeyiphi na imigaqo-nkqubo kunye neenjongo ezintle zomqeshi, ukhuselekile kwaye ukhuselekile ngokusekwe kumphathi wakho ngqo ukuba ukongamela akunamandla.
30: 00 Abaqeshi abasebenzisana nabo, i-OutBüro inokuba yi- LGBTIiprojekthi ezinxulumene ne-Q kunye neenkonzo zokungenisa isango kunye neendleko zokonga iindleko zikwenza konke endlini.
35: 00 Uninzi lwabaqeshi abanalo umxholo wokungafani kwiwebhusayithi yabo abafunwa ngabaviwa xa bekhetha ukufaka isicelo somsebenzi. Abaqeshi banokusebenzisa i-.lgbt kunye negama lesizinda segay kunye nokusebenzisa i-OutBüro njengeqonga lokufaka uphawu lomqeshi ekutsaleni abagqatswa abaphezulu kwaye bahlule abo bakhuphisana nabo.
38: 00 Uninzi luqala amashishini alo.
PrideLife kude kube sekupheleni kuka-2020 ukubonelela nge-30% isaphulelo kunye nokuthenga isibonelelo esinye.
Nxibelelana noScott kwi-OutBüro e https://www.outburo.com/profile/scottseitz/
Joyina uScott kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abesini esahlukileyo, ikumkanikazi, amahlakani kunye nathi abaqeshi abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
Ngaba ungathanda ukuvezwa ngolu hlobo? Nxibelelana nomninimzi uDennis Velco. https://www.outburo.com/profile/dennisvelco/
tags: .domain, .lgbt thambeka, lgbt urhwebo, Ukugcinwa kwe-intanethi, UkuSebenza kweeNjini zoPhando
Page 1 Page 2 ... Page 4 kwiphepha elilandelayo